Shir Madaxeedkiia Suxufiyiinta Carabta oo Lagu Soo Gunaanaday Qaahira+Sawiro – SBC
Shir Madaxeedkiia Suxufiyiinta Carabta oo Lagu Soo Gunaanaday Qaahira+Sawiro
Waxaa maanta lagu soo gunaanaday magaalada Qaahira shir madaxeedka suxufiyiinta carabta kaasoo ka socday labadii maalmood ee lasoo dhaafay.
Shirkan oo si dheer looga hadlay xaaladda dalalka Syria, Soomaaliya, Suudaan, Ciraaq, Masar, Yemen, Falastiin, Libya iyo Tuunisiya ayaa waxaa gunaanadkii shirka kasoo baxay go’aanno lagu wajahayo xaaladaha adag ee soo wajahaya suxufiyiinta dalalka carabta ee ay ka socdaan iska hor imaadyada isbedel doonka ah iyo dagaalada sokeeye.
Ururka Suxufiyiinta Adduunka ee loo yaqaano IFJ oo kulankan soo abaabulay ayaa tilmaamay in suxufiyiinta dunida carabta ay ka ahaayeen qeyb muhiim ah is badalada siyaasadeed ee ka dhacaya dunida Carabta, balse ay sababtay in suxufiyiin dhowr ah ay dhibaato weyn kasoo gaartay. Jim Boumelha, Guddoomiya Ururka Suxufiyiinta Adduunka, ayaa u sheegay hogaamiyaasha suxufiyiinta Carabta in dilka iyo dhibaateynta suxufyiinta Carabta aysan maanta ku koobneyn dalalka Soomaaliya, Ciraaq iyo Palastine, balse suxufiin dhowr ah lagu dhibaateeyay dalal kale oo ka tirsan dunida Carabta.
Ururka Qaranka Suxufiyiinta Soomaaliyeed ee NUSOJ ayaa kasoo jeediyay warbixin dheer oo ku saabsan xaalada adag ee khatarta leh ee ay suxufiyiinta Soomaaliyeed ku shaqeeyaan maalin walba. “Dilkii iyo dhawaacii loo geysanayay suxufiyiinta Soomaaliyeed waxaa kusoo kordhay in kuwii saxaafadda caburinaayay ay ka dhigaan shaqada suxufiyiinta mid dambi ah haddii uu suxufigu u adeegsano mihnadiisa si xor ah oor madaxbanaan,” ayuu yiri Cumar Faaruuq Cusmaan, Xoghayaha Guud ee NUSOJ oo shirka ka hadlaayay.
Go’aamada kasoo baxay shirka ayaa ka mid ahaa in maalin gaar ah loo qoondaayay in dhamaan dunida Carabta laga xuso ugaarsiga lagu hayo suxufiyiintaa Soomaaliyeed iyo xadgudubyada sii kordhayo ee ka dhanka warbaahinta Soomaaliyeed.
Dalalka shirkan ka qeyb galaayay ayaa kala ahaa Kuwait, Palestine, Jordan, Bahrain, United Arab Emirates, Lebanon, Libya, Oman, Tunisia, Ciraaq, Soomaaliya, Algeria, Sudan, Djibouti, Egypt, Yemen, Mauritania iyo Morocco.